Atsimo Atsinanana: 10.000 Ariary ny kilaon’ny jirofo
lundi, 04 septembre 2017 17:43
Nanapa-kevitra ny ao amin'ny faritra Atsimo Atsinanana fa efa azo atao ny manangona ny vokatra jirofo noho ny fiovaovan'ny toetr'andro ka tsy miara-matoy ny vokatra. Na izany aza dia ny fivezivezeny ao anatin'ny faritra aloha no azo fa tsy maintsy mandoa tamberimbidy eny amin'ny Kaominina kosa raha hivoaka ny tanàna.
Ny famoahana azy ivelan'ny faritra kosa dia mbola miandry mba hitazomana ny atsaran'ny vokatra any amin'ny tsena iraisam-pirenena, hoy ny lehiben'ny Faritra Atsimo Atsinanana, Dr Théodoret ka hampahafantarina ihany aorian'ny fihaonana eo amin'ireo mpisehatra.
Manodidina ny 6.000 Ariary ka hatramin'ny 10.000 Ariary ny kilaon’ny jirofo amin'izao fotoana izao. Ny seham-pihariana jirofo izay anisan'ny mampidi-bola voalohany ny faritra Atsimo Atsinanana satria mampiditra hatrany amin'ny 600.000.000 Ariary isan-taona ho an'ny faritra ka ny ampahefan'io vola io ho an'ny Kaominina niavian'ny vokatra.
Etsy andanin'izay anefa dia efa manahy sahady amin'ny fiakaran'ny vidim-piainana aty Vangaindrano ireo olon-tsotra satria dia efa 650 Ariary ny kapoaky ny vary gasy amin'izao fotoana izao nefa ny fidiran'ny mpianatra ihany koa tsy maintsy hatrehina.
Tanjombato: Foire interantionale de l'agriculture »
cialis 20mg coupons can you buy generic cialis
[url=http://watercheck6.wikidot.com/blog:1]get prescription for cialis online[/url]
car insurance declaration page farmers auto insurance reviews
[url=http://autocarins2018.com/cheap-car-insurance-ontario/]a auto insurance tulsa[/url]
mardi, 12 décembre 2017 00:31
car insurance florida quotes auto insurance forms
[url=http://autocarins2018.com/uber-and-car-insurance/]sacramento car insurance[/url]
vendredi, 08 décembre 2017 09:32
auto insurance florida cheap compare car insurance online
[url=http://autocarins2018.com/grace-period-for-car-insurance/]auto insurance cincinnati[/url]
mercredi, 06 décembre 2017 02:17
mardi, 05 décembre 2017 22:02
jeudi, 30 novembre 2017 15:25
[url=http://carinsuranceflocompare.com/]car insurance uk[/url]
mardi, 28 novembre 2017 20:10
[url=http://canadianpharmacyus365.com/]when will cialis go generic[/url]
lundi, 27 novembre 2017 15:39